Ukuzala - Shenzhen HONGSBELT
Qhuba / Idler Shaft
HONGSBELT i-drive / i-idler shaft inokwakhiwa ngensimbi engenasici, i-carbon steel kunye ne-aluminium alloy materials; ezi zixhobo zintathu zicetyiswa ukuba zisetyenziswe kakhulu.Ukubonakala kwe-shaft kuyilwe kwiintlobo ezimbini eziyi-square shaft kunye ne-shaft ejikelezayo ngokulandelanayo. Ubude beshaft kufuneka benziwe ngokobubanzi obusebenzayo bebhanti kunye nayo yonke imilinganiselo enxulumene nesakhiwo sokuhambisa esifunekayo.
A B C D E(ubuninzi.) F(ubuninzi.) G H I K LR M MR
25.4 B+130 50 80 25 25 45 2 4.5 7.2 38 29
31.8 B+140 60 80 25 25 45 4.5 7.2 38 29
63.5 B+285 100 185 35 35 125 4.5 8.2 38 45
70.0 B+310 110 200 45 40 136 5.5 10.2 50.8 45
80.0 B+355 125 230 45 40 146 5.5 10.2 50.8 --
90.0 B+400 140 260 45 40 165 5.5 10.2 50.8 --
Ingcaciso yoyilo engentla yeyoreferensi kuphela.
Umkhono wejenali weTEFLON
I-TEF-1 201 --
I-TEF-2 202 --
I-TEF-3 203 -- 16.97(17) 17 2.8 5 25 3 23 3 16 25 60
I-TEF-4 204 -- 19.95(20) 20 2.8 5 35 3 26 14.5 35 65 55
TEF-5 205 05 24.95(25) 25 3.8 5 35 3 33 18.5 35 80 70
I-TEF-6 206 06 29.95(30) 30 3.8 5 35 3 38 16 34 80 70
I-TEF-7 207 07 34.95(35) 35 3.8 8 35 3 43 18.5 35 90 80
TEF-8 208 08 39.95(40) 40 3.8 8 45 3 48 16 45 90 80
I-TEF-9 209 09 44.95(45) 45 4.8 8 45 3 55 22.5 45 120 100
Ukunyamezela ukuqhutyelwa kwejenali yensimbi engenasici kunye nejenali ye-TEFLON yi-± 0.05 mm.
Ukunyamezela ukusetyenzwa kwe-TEFLON kuthwala yi-± 0.1 mm.
Ukuthwala ubungqina bamanzi kufuneka kusetyenziswe ngaphakathi kokulayishwa okuphakathi kwe-45 Kg / m2 kwaye isantya sebhanti lokuhambisa kufuneka sibe ngaphantsi kwe-18M ngomzuzu ngamnye kuluhlu lokhuseleko.
Ngemizekelo yesicelo sokwenyani, nceda ubhekisele kwiMizekelo kwimenyu ephezulu.
Xa ubude bejenali ye-drive/idler shaft ingaphezulu kwe-950mm okanye kumthwalo onzima wokulayisha, i-drive/idler shaft iya kukhubazeka ngenxa yoxinzelelo olukhulu. Umlinganiselo ovumelekileyo wokuguqulwa kwe-deformation yi-2.5mm ye-drive shaft, kunye ne-5.5mm ye-idler shaft. Ukwandisa ubude be-shaft kunye nokunciphisa inkunkuma ye-torque, kuyimfuneko ukufaka iibheringi ezincedisayo phakathi kwee-shafts kumacala omabini ukuxhasa indawo ephakathi ye-drive / i-idler shaft. Iya kunqanda ukuguqulwa kunye nokuphambuka kwe-drive/idler shaft.
Ukuba kuyimfuneko ukwamkela i-intermediate axiliary beararing okanye hayi, nceda ubhekisele kwiTheyibhile yoKuphambuka kwimenyu esekhohlo.
Amanqaku oFakelo loNcediso oluPhakathi
Ukufakelwa kweebheringi ezincedisayo eziphakathi, ukunyathela okuncedisayo kufuneka kudityaniswe kwisakhelo secala lokuhambisa nge-welding, okanye kulungiswe izikrufu ezakhiweyo. Ulwakhiwo oludityanisiweyo lokuhambisa kufuneka lwenziwe ngesicwangciso esichanekileyo kunye nolwakhiwo oluntsonkothileyo. Nceda uqaphele ubukhulu be-sprocket ye-drive kwaye uqinisekise ukuba iyakwazi ukuquka ukufakwa kwe-intermediate axiliary bear. Nceda ubhekisele kwiSplit Bearing Dimension Comparison Table ngezantsi.
Iibheringi ezincedisayo eziphakathi zihlala zithatha iibheringi eziqhekezayo. Kulula ukuyifaka, ukugcina, kunye nokunyamezela ukulayisha okukhulu. I-joint of bearing bearing kufuneka ibe yi-perpendicular ukuya kwindlela yokuthutha yebhanti, ukwenzela ukuba kwandiswe amandla okunyamezela kwe-drive okanye i-idler shaft. Ngelixa uthatha i-intermediate axiliary bear, nceda ukhethe iimveliso ezikwaziyo ukunyamezela ukulayishwa kwe-bidirectional ye-radial kunye ne-axial.
Ukuthwala ibhola yesiqhelo kukwafumaneka ukusebenzisa i-adaptha ejikelezileyo njengesixhobo esixhasayo endaweni yentsimbi encedisayo ephakathi. Ngomlinganiselo wokusetyenzwa weadaptha engqukuva, nceda ubhekisele kwiSplit Bearing Dimension Table ngezantsi.
Itheyibhile yoMdaniso wokwahlulahlula
35 80 205 60 25 33 60 85 110 170 M12
40 85 205 60 25 31 60 85 112 170 M12
45 90 205 60 25 33 60 90 115 170 M12
50 100 205 70 28 33 70 95 130 210 M16
Ukuthwala okuNcedisayo okuLula
Xa ibhanti lokuhambisa liqhutywa yi-sprocket ene-diameter encinci okanye iqhutywe kwindawo epholileyo kunye neqondo lokushisa eliphantsi, sincoma ukuba uthathe olunye uhlobo lwe-axiliary bear bears endaweni yokwahlula ukuzala.
I-bracket yokuncedisa i-axiliary bear yenzelwe ukulayisha okunzima, ukusebenza kwangethuba, imo engqongileyo kunye nokuhluka kweqondo lokushisa ngaphezu kwe-40 ° C, kunye ne-drive / i-idler shaft ekufuneka ifake i-axiliary bear.
Umzekelo woLwakhiwo oluNcedisayo lweBracket
Lo mfanekiso uboniswe ngasentla unika umzekelo we-38mm kuphela. Ungabhekisa kwimilinganiselo engentla ukwenza ezi zincedisi ngokwakho. Ngominye imilinganiselo, nceda uqhagamshelane nesebe lobugcisa be-HONGSBELT kunye nee-arhente zasekhaya ngolwazi oluthe vetshe. Sizimisele ukunika inkonzo kuwe.
Itheyibhile yokuphambuka kweShaft
Ubude be-Shaft (mm)
D = Qhuba, mna = Ukungenzi lutho, N = Hayi, Y = Ewe